दिनको तीन वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै हुन्छ नपत्याउँदो फाइदाहरु – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दिनको तीन वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै हुन्छ नपत्याउँदो फाइदाहरु
छोकडा अर्थात् ड्राइफुडको एउटा किसिम । अंग्रेजीमा date भनिने यो फलको अर्को नाम खजुर पनि हो । चाहे छोकडा भन्नुस् या खजुर, यो फल मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभकारी छ । कतिसम्म भने, तपाईंले दिनको ३ वटा छोकडा एक हप्तासम्म लगातार खानुभयो भने, त्यसले नपत्याउँदो फाइदा दिने गर्छ । त्यो फाइदाबारे जानेपछि पक्कै पनि तपाईंले यो नरम नरम, गिलोगिलो, गुलियो स्वादिलो फललाई आफ्नो नियमित आहारामा सामेल गर्नुहुनेछ । आउनुहोस्, छोकडाको नियमित सेवनले हुने फाइदाहरुबारे केही जानकारी हासिल गरौं ।
१. आन्द्राको क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ : छोकडाको सेवन गर्दा हाम्रो आन्द्रामा फाइदाकारी व्याक्टेरियाहरुको बृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो पाचन प्रणालीले राम्रो काम गर्न सक्छ । जब पाचनप्रणालीले राम्रो काम गर्छ, त्यसको अर्थ त्यहाँ हानिकारक किटाणुहरु पैदा भइरहेका छैनन्, खानेकुरा राम्रो पचिरहेको छ । पाचनप्रणालीले राम्रो काम गर्नु भनेकै आन्द्राको क्यान्सर हुने जोखिम कम हुनु पनि हो । यस अर्थमा छोकडाको नियमित सेवनले आन्द्राको क्यान्सर हुने जोखिम कम हुन्छ ।
२. पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ : छोकडामा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक फाइबरहरु पाइन्छ । एक कप छोडडामा १२ ग्राम जति फाइबर हुन्छ । त्यो भनेको दैनिक रुपमा मानिसलाई चाहिने फाइबरको मात्राको ४८ प्रतिशत हो ।
३. शरीरमा शक्ति र स्फूर्ति बढ्छ : छोकडामा प्राकृतिक रुपमा नै चिनी, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज र सुक्रोजहरु पाइन्छन् । यी सबै तत्वहरुले हामीलाई तत्कालै र तुरुन्तै शक्ति दिने गर्छ । अरु कृत्रिम शक्तिवद्र्धक पेयहरुपमा पाइँदै नपाइने फाइबर, पोटासियम, म्याग्नेसिम, भिटामिनहरु, एन्टिअक्सिडेन्ट जजस्ता तत्वहरु छोकडामा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले तपाईंलाई शक्ति दिने मात्रै हैन, चाँडै थाक्न पनि दिँदैन ।
४. मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ : खजुरमा भिटामीन बी६ पाइन्छ । यो भिटामीनले मस्तिष्कमा सेरोटोनिन र नोरेपिनेफ्रिनको उत्पादनमा मद्दत गरेर मस्तिष्कको क्षमता अभिबृद्धिमा मद्दत गर्छ । सेरोटिनले हाम्रो मुडलाई ठीक राख्ने काम गर्छ भने नोरेपिनेफ्रिनले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई तनावहरुसँग जुध्ने क्षमता प्रदान गर्छ । एक अध्ययनलेडिप्रेसन भएका मानिसहरुमा भिटामीन बी६ को कमी भएको देखाएको छ ।जब मस्तिष्क तनावबाट मुक्त हुन्छ, राम्रो मुडमा हुन्छ, त्यो अवस्थामा उसले राम्ररी लेखपढ गर्न र सूचनाहरुलाई ग्रहण गर्न सक्छ ।
५.हेमरोइडको उपचार : हेमरोइड भनेको त्यो पीडादायी अवस्था हो, जसमा मासिनको मलद्वारका मुख र नसाहरुमा जलन हुन्छ र सुन्निन्छ । धेरै जसो अवस्थामा यो कब्जियतकै कारणले हुने गर्छ, जसले गर्दा मलद्वारको मुखको भागमा तनाव, जोड परेर त्यो स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ । यो भनेको डरलाग्दो र पीडादायी अवस्था हो र यो जटील बन्दै जाँदा चिकित्सीय हस्तक्षेपकै जरुरत पर्न पनि सक्छ । तर सामान्यतः खानपीनहरुमा परिवर्तन गरेर कब्जियतबाट बच्नु नै यो समस्याको सबैभन्दा सजिलो र अचूक समाधान हो ।
६ मुटको लागि पनि फाइदाजनक : मुटुको लागि सबैभन्दा राम्रो खानेकुराहरुमा पोटासियम भएका खानेकुराहरु मानिन्छ । रमाइलो कुरा के छ भने छोकडामा पोटासियम पनि पाइन्छ ।
छोकडामा पाइने पोटासियमले खराब कोलेस्ट्रोललाई घटाएर हाम्रा रक्तधमनीहरुमा अवरोध पुग्न दिँदैन । फलतः हामीलाई हृदयघात हुने समस्याबाट पनि यसले जोगाउँछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । बुढी आइमाइहरुमा गरिएको एक अध्ययनलेपोटासियमले हृदयघात, मस्तिष्कघात र अकाल मृत्यको खतरा कम गर्ने देखाएको थियो । छैन त छोकडाको गुणकारी फाइदाहरु ? बजारमा सजिलै र सस्तैमा किन्न पाइने यो गुणकारी फललाई अब तपाईं हामी पनि हाम्रो आहारामा नियमित समावेश गर्ने हो कि ?
लोखर्केले पानी मागेर खाएको भिडियो भाइरल
जानी राख्नुहोस : आइतबार सूर्यदेवको पूजा गरे हुन्छ नौ ग्रहको शान्ति,मिल्नेछ नसोचेको लाभ !